Vaovao - Xinzi Rain Group dia manao serivisy fanaingoana atin'akanjo iraisam-pirenena
Xinzi Rain Group dia manatanteraka serivisy fanaingoana atin'akanjo iraisam-pirenena
Xinzi Rain Group, Tamin'ity volana ity, nanangana tranokala iraisam-pirenena ny orinasa hanatanterahana serivisy fanaingoana atin'akanjo iraisam-pirenena.
Ny orinasanay dia manome "fiakanjo lamaody" tokana ho an'ny vehivavy eran'izao tontolo izao, manao ny vehivavy ho tsara tarehy kokoa, tsy voafatotra intsony, ary hanana fahatokisan-tena sy hery bebe kokoa. Ny vokatra dia misy High Heels, Boots, Sportswear, Underwear, Lingerie, Seamless ary Under Free Bras, Plus Size Bra & Brief, ary ny sasany dia miaraka amina marika tompony.
Ny orinasa Xinzi Rain dia mikendry ny hanomezana "Fashion Wearing" tokana amin'ny vehivavy eran'izao tontolo izao, hahatonga ny vehivavy ho tsara tarehy kokoa, tsy voafatotra intsony, ary hanana fahatokisan-tena sy hery bebe kokoa.
Xinzi Rain dia nomena mari-boninahitra orinasa tsara kalitao, orinasa sivilizasiona, orinasa fiarovana ny tontolo iainana ary marika folo ambony amin'ny indostria atin'akanjo any Shina. Manantena ny ho avy, Xinzi Rain dia hanaraka ny fotoana, hitrandraka ary hanavao, ary hiroso tsikelikely mankany amin'ny làlan'ny fampandrosoana ny indostrialy, ny varotra, ny teknolojia, ny fanaingoana ary ny fanangonana.
Ao amin'ny fironana vaovao amin'ny fanatontoloana, ny orinasa Xinzi Rain dia nandefa ny serivisy fanamboarana atin'akanjo iraisam-pirenena, hanarahana ny filan'ny olona isan-karazany amin'ny firenena sy faritra maro, mba hanomezana tolotra manokana ho an'ny namboarina, amin'ny fitaovana, fomba, habe, loko, LOGO ary fonosana fanatsarana fanamboarana, mba hanomezana haingana, mahomby, matihanina sy azo antoka customization serivisy.
Mba hijerena ny serivisy vehivavy manao akanjo ba anatiny sy serivisy: OEM / ODM, serivisy famolavolana, fanaovana santionany, MOQ, famokarana betsaka, fotoana fandefasana, fotoana fandefasana, antoka amin'ny fandoavanao, ny orinasanay, ny olona anay, ny vokatra sns., Pls mahatsapa afaka mandefa mailaka aminay, avelao ny msg-nao, ampio nomerao whatsapp, na miantso anay, tongasoa anao tokoa!